Intlanzi yesele. Funda konke malunga nendlela yabo yobomi kunye nolwamvila olunetyhefu | Ngeentlanzi
Zininzi iintlanzi ezibonakala njengezinye izilwanyana. Iyenzeka kwimeko ye- Iintlanzi okanye intlanzi yengwenya. Kule meko, siza kusondela ukuhlangabezana intlanzi yesele. Yintlanzi enegama lezenzululwazi IHalobatrachus didactylus kwaye inkangeleko yayo ifana nqwa nqwa neentlanzi. Inempawu ezinetyhefu kwaye kuphela kweentlobo eziseleyo zeHalobatrachus.
Kweli nqaku siza kukuxelela malunga neempawu, indlela yokuphila kunye nomdla wale ntlobo. Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi nge frogfish?
2 Uluhlu, indawo yokuhlala nokuziphatha
3 Ingozi yetyhefu
4 Ungayinyanga njani i-toadfish venom
Inesakhiwo samathambo esifana kakhulu neso se intlanzi yelanga. Ubude abafikelela kubo Iimpawu zabantu abadala zihlala zi malunga ne-50 cm. Umzimba uyafana kakhulu nomsonto kwaye, ke ngoko, ufumana eli gama liqhelekileyo. Inomzimba ojikeleziweyo kwaye omkhulu ngomlomo obanzi.
Inemiqolo emibini egutyungelwe lulusu kunye namaphiko amabini emqolo. Isiphelo sokugqibela sangemva sinemiqolo emithathu emifutshane, eyomeleleyo egqunywe lulusu. Owesibini mde kwaye unee-ray eziphakathi kwe-19 ukuya kwezingama-24 ezithambileyo ezinolusu olugudileyo kwaye ugqunywe luhlobo lwencindi oluzivelisayo ukuzikhusela. Ubunzima obucekeceke obuyivumelayo ukuba ityibilike xa amarhamncwa ezama ukubabamba.
Umbala wayo umbala omdaka ngebala kwaye unamabala ahlukeneyo omdaka. Kuluhlu, njengezinye iintlanzi ezinje nge Ukrebe omhlophe okanye Ibarracuda intlanzi, inobungozi ebantwini. Kwaye inameva anetyhefu ebakhonkxa abo bantu ibabeka njengethagethi yayo.
Uluhlu, indawo yokuhlala nokuziphatha
Singayifumana i-toadfish kuyo yonke indawo unxweme lweAtlantiki lwaseAfrika nakwiNtshona yeLwandle lweMeditera. Ifuna amanzi ashushu kunye namanzi anzulu, yiyo loo nto ihlala kumanzi aselwandle ashushu. Sinokubona ezinye iisampulu ukusuka kwiimitha ezili-10 ubunzulu ukuya kwi-50 yeemitha ngaphezulu okanye ngaphantsi. Nangona ubukhulu becala bezintlanzi zolwandle, baye babonwa behlala kwimilambo ethile eGambia.
Ngokuqhelekileyo, yintlanzi ehleli kakuhle. Ayithandi ukuhambahamba kakhulu, kodwa ihlala kwisanti ethambileyo okanye eludakeni ixesha elininzi. Ngamanye amaxesha bayazimela phantsi kwentlabathi okanye phakathi kwemiqolomba yamatye ukuze bazimele kumarhamncwa anokubazingela okanye bangabi naxhala lazo.
Itya elinye ixhoba elizingelayo ngenxa yesakhono sayo sokuzifihla. Ukutya kwabo ikakhulu kuqulathe ezinye iintlanzi ezincinci, ezinye iimollusk kunye neecustaceans. Inokuziphatha okungaqhelekanga ekuveliseni kwayo kwakhona. Imazi ibeka amaqanda (makhulu ngobukhulu) kwaye igcinwa yindoda. Ukubhengeza ukukhuselwa kwala maqanda kwaye njengesoyikiso kwezinye iintlanzi ezijikelezileyo, i toadfish iyakwazi ukukhupha uthotho lwezandi. Phakathi kwezandi ezinako ukukhupha Sifumana ezinye iirissi, iigrunts kunye "neqhekeza" eliqhelekileyo elenziwa ziinzipho namasele. Esi sesinye isizathu sokuba igama labo eliqhelekileyo lize kuye elingapeyintwanga.
Ezi herses zisebenza ukugcina imazi ikufutshane kangangoko kwaye ikhusele ezinye iinkunzi ezinokuhlasela amaqanda.
Njengokuba besesitshilo, intlanzi yamadevu luhlobo oluchazwa ngokuba luyingozi ebantwini nakwabahlambi. Ukuba kubunzulu phakathi kwe-10 kunye ne-50 yeemitha, iibhafu ezininzi zinokubaleka zingene kuzo kwaye zilunywe. Ityhefu ayabajojisayo yingozi yokulunywa kwakhe.
Ulwamvila alubulali, kodwa into yokuba iziphumo zokulunywa zihlala ixesha elide kubaluleke kakhulu. Intlungu emva kokulunywa ikhawuleza kwaye yomelele kakhulu. Indawo echaphazelekayo iya kudumba kwaye kuya kubakho imingxunya kunye nokutsha okunamandla. Kuxhomekeke kuhlobo lokuluma olithathileyo, iintlungu zinokusasazeka kwilungu lonke lomzimba de zikhubazeke. Sisifo sentsholongwane esikhokelela ekubonakaleni kwenxeba elinomsindo. Ukuba ayinyangwa ngokuchanekileyo, inokukhokelela kwiingxaki ezimbi.
Intlungu inokuhlala iintsuku ezininzi kwaye ibonise iintlungu ezingapheliyo kwiinyanga ezininzi kwindawo echaphazelekayo. Ngamanye amaxesha, iimeko ze-Ankylosis ziye zaxelwa. Luhlobo lwee-sequelae ezishiywe kukulunywa yile ntlanzi kwaye oko kubangela ukungabikho kwentshukumo kumalungu ajikeleze ukulunywa. Oku kunqongophala kokuhamba kunokubakho ngokuyinxenye okanye ngokupheleleyo.
Ungayinyanga njani i-toadfish venom
Ubuhlungu bokulunywa yile ntlanzi abunayo nayiphi na intsholongwane efanelekileyo inokuyiphelisa ngokupheleleyo. Ke ngoko, kufuneka uyazi ngakumbi le tyhefu ukuze inyangwe. Iimpawu kunye nomonakalo kufuneka ulawulwe kakuhle ukuthintela ukukhula okukhoyo.
Okulandelayo, siza kuchaza amanyathelo ekufuneka elandelwe xa kulunywa i-toadfish:
Zama ukukhupha ubuthi obuninzi kangangoko ukwenza inxeba lingaphantsi. Kuya kufuneka ubeke uxinzelelo enxebeni ukuze ligazi kangangoko kunokwenzeka kukhutshwa elona nani likhulu letyhefu.
Siza kubeka i-tourniquet kwiisentimitha ezimbalwa ngaphezu kwesilonda kwaye siya kuyikhulula ukuze igazi lijikeleze.
Sisebenzisa amanzi ashushu ukuya kuthi ga kwiidigri ezingama-50 zentlungu ukuba yehle. Siza kuyenza kangangeyure okanye iyure enesiqingatha.
Ukuba inxeba alophi, Kuya kufuneka senze ukusika ukuze ukopha kuphume inetyhefu engaphezulu. Inxeba ekufuneka silibangele kufuneka libe lincinci kakhulu, ukuze lingadingi kuvalwa ngotyando.
Kuyacetyiswa ukuba utofe ubungakanani be 0,1-0,5 ml ye-5% ye-potassium permanganate. Oku kuya kufuneka ukuba kwenziwe ngugqirha okhethekileyo.
Ukulawula iintlungu zokuhlaba, kulungile ukwazisa i-meperidine hydrochloride intramuscularly.
Njengamaxesha onke, olona nyango lulungileyo koku kukuthintela. Masiqwalasele imiqondiso eyingozi size silinganisele izindlu zethu zokuhlambela kwiindawo ezivumelekileyo nezikhuselekileyo. Ndiyathemba ukuba olu lwazi luyakunceda ukuba wazi ngakumbi malunga ne-frogfish.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yesele